Safka hore ee Erdogan ee Wadada Gayrettepe Istanbul Subway | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWadada Tareenka Koowaad ee loogu talagalay ErdoÄŸanâ € ™ Gayrettepe Istanbul Airport Metro
erdogan gayrettepe mashruuca metro ee garoonka diyaaradaha ee istanbul wuxuu ku biirayaa marinka koowaad ee tareenka
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa ka qaybgalay xafladdii ugu horraysay ee alxanka tareenka ee Mashruuca Maddaarka Gayrettepe-Istanbul, kaas oo rakaab ku qaadi doona gegada diyaaradaha ee Istanbul. Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, Turkiga "metro dhakhso ugu horeysay" waxay ka soo qeyb galeen xafladdii alxamidda ee ugu horreysay ee xarigga metrooga kaasoo qaadi doona rakaab ka socda Gayrettepe kuna tagaya garoonka diyaaradaha Istanbul. Madaxweyne Erdoğan wuxuu sheegay in Gayrettepe uu 35 daqiiqo ku qaadan doono Gegida Diyaaradaha Magaalada Istanbul.
Erdo saidan wuxuu yidhi, “Madaarkeenna Istaanbuul ee Istanbul oo laga furay 90 milyan oo rakaab ah waa mid ka mid ah mashaariicda waa weyn. Waxaan gurnay jaakado si loo fududeeyo loona dardargeliyo gaadiidka dadweynaha. Dhererka guud ee metro waa 37.5 kiiloomitir waxayna ka kooban tahay 9 saldhig.
“10 qoditaan ayaa hal mar wada shaqeeya. 94% ka mid ah howlihii qodista ayaa lagu dhammeystirey qeyb muhiim ah oo tunelada. Hadda waxaan bilaabeynaa saarista biraha. Hadafkayagu waa inaan qabanno 470 mitir oo tareen ah iyo 24 saacadood oo shaqo maalin kasta. Waddankeenu wuxuu soo saaraa biraha iyo alaabada.
Saxeexida iyo wadiiqooyinka tareenka dhulka hoostiisa ayaa lagu fulin doonaa isla waqtigaas. Gawaarida metroogu waxay ku shaqeyn doonaan xawaare dhan 120 kiiloomitir saacaddii. Waxay ku guuleysan doontaa cinwaanka xariiqda metrooga ugu horreeya ee waddankeena. Gaadiidka waxaa laga bixin doonaa Gayrettepe 35 daqiiqo. Qeybta ilaa Hasdal waxay furi doontaa dhamaadka sanadka. Saldhigga İhsaniye wuxuu ku yaal qaybta la geyn doono adeegga marka hore. Wuxuu yiri waxaan ka badbaaday adeegyadii gaadiidka ee Istanbul.
Ku Saabsan Gayrettepe Airport Airport Mashruuca
Waxay ku taalaa isgoyska qaaradaha Aasiya iyo Yurub, ee Istanbul, oo barbar socota kobaca dadweynaha, xoogga shaqaalaha iyo kobaca dhaqaalaha dalka, magaalooyinka, is dhexgalka iyo casriga caalamiga ah oo si sahlan loo heli karo gaadiidna u baahan. Awoodaha garoomada diyaaradaha ee Atatkrk iyo Sabiha Gök Istanbulen ee Istanbul ayaa ku filnaaday maalin kasta oo dhaafsiisan iyada oo laga soo horjeedo kordhinta baahida rakaabka gudaha iyo shisheeyaha ah. Sababtaas awgeed, “Gegada diyaaradaha ee cusub ee Istanbul” oo la aasaasay Juun 7, 2014, waxaa laga dhisayaa dhinaca Yurub ee Istanbul, inta u dhaxaysa tuulooyinka Yeniköy iyo Akpınar, oo leh lix waddo oo madax-bannaan. Wejiga koowaad ee garoonka waxaa la hawl geliyey Oktoobar 29, 2018.
Iyadoo la tixgalinayo garoonka diyaaradaha oo leh awooda rakaabka ee heerkan iyo xarumaha kale ee lagu noolaado ee ku xeeran, waxaa lagama maarmaan ah in gobolka laga taageero gaadiidka dadweynaha. Qadka Nidaamka Jidka Diyaaradaha ee 3-aad wuxuu ka mid yahay jidadka waaweyn ee metrooga ee loo qorsheeyay in laga dhiso dhinaca Yurub ee Istanbul. Khadkan, waxaa la hubin doonaa in magaaladu ay la jaanqaaddo xarumaha muhiimka ah ee gaadiidka dadweynaha iyo khadadka tareenka ee magaalada, oo siinaya deg-deg iyo deggenaansha garoonka Diyaaradaha 3-aad. Dhererka guud waa qiyaastii. 70 kiiloomitir Dhererka xariiqda u jiheysan doonta jihada Gayrettepe- gegada 3-aad waa qiyaastii 37,5 kiiloomitir, garoonka 3aad-Halkalı Jihada waxaa loogu talagalay 32 kiilomitir. Qandaraaska Khadka Duulimaadka Cusub ee Gayrettepe Istanbul Khadadka Miilaadan 07.12.2016, Madaarka Cusub ee Istanbul - Halkalı Qandaraaska qandaraaska 'Metro Line' waxaa la saxeexay 07.03.2018, wax soo saarkuna wuxuu ka bilaabmay goobta.
Gayrettepe - Khadka Duulimaadka Cusub ee Istanbul wuxuu ku yaal qaybta waqooyiga Yurub ee Istanbul, dhanka bari - geeska galbeed wuxuuna ka gudbaa Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp iyo Arnavutköy Degmooyinka, siday u kala horreeyaan.
Waxay ka kooban tahay saldhigyo. Saldhigyadan ayaa midba midka kale ku xidhan yahay laba kanaal oo waaweyn oo dhexroorkoodu yahay 37 m midkiiba, qiyaastii 5.70 km dherer ah iyo tuntolo isku wareeg ah oo dhererkoodu dhan yahay ilaa 1.1 km, xariiqa oo dhanna wuxuu ku dhisan yahay dhulka hoostiisa. Inta jeer ee ugu badan ee hawlgalku waa 3 km / saac khadka, halkaasoo inta jeer ee safarka loo qorsheeyay 120 daqiiqo, saldhigyada iyo dariiqa waxaa loogu talagalay inay u oggolaadaan gawaarida inay ku shaqeeyaan 4 ama 8 garoobe.
Faahfaahinta Farsamooyinka Casriga ah ee Maddaarka Diyaaradda Gayrettepe ee Istanbul
Qadka metrooga cusub ee garoonka diyaaradaha ee Gayrettepe Istanbul, oo qiyaastii dhererkiisu yahay 37,5 km, wuxuu ka kooban yahay guud ahaan 1 Xarumood, 8 Xarumood oo Isku xira, 9 Xarumood Adeeg iyo 9 Guryood oo Degdeg ah, 10 kamid ah waa ceel qoditaan. Waxay ka bilaabanaysaa Line Gayrettepe Station, waxay sii mareysaa Kağıthane, Kemerburgaz, Hasdal, Göktürk, İhsaniye Stations, waxay gaartaa garoonka diyaaradaha ee Istanbul, halkaasoo Airport - 4 (Terminal-2 Front), Airport-2 (Main Terminal Front) iyo Airport-1 (THY Support Services Campus), siday u kala horreeyaan. ) Waxaa loogu talagalay in la hubiyo in rakaabka iyo shaqaalaha la wareejiyo saldhigyadooda lagu fuliyo xaalado casri, raaxo leh oo deg deg ah.
Isgoyska xariiqda udhaxeysa Gayrettepe iyo Kağıthane waxaa lagu dhisi doonaa Habka New Austrian Tunneling Method (NATM), qeybta isgoysyada ee udhaxeysa Kağıthane - End of Line waxaa lagu dhisayaa 10 Mashiinada Xaraashka Mashiinka (TBM / EPB). 10 of 4 TBM / EPB waxay qodista ka bilaabeen İhsaniye, 4 waxay ka bilaabeen Kemerburgaz iyo 2 oo laga soo qaaday saldhigyada Hasdal Station.
Wadada Wadada Diyaaradaha ee Magaalada Gayrettepe ee Magaalada Istanbul
Ogeysiiska Qandaraaska: Qaadashada Mashiinka Mashiinka Alxiin iyo Alumino Termite Welding
Horumarinta Flash ee Gayrettepe Madaarka Jaamacadda Istanbul
Wadada Subway ee Gayrettepe Istanbul waxay furi doontaa Dhamaadka 2020
Qandaraaska Torbalı - Wareegyada Ödemiş ee Qashinka Caddeynta iyo Burburka Suuqa
Ku Saabsan Mashruuca Maddaarka Diyaaradaha ee Istanbul
Madaarka Maddaarka ee Istanbul
Gayrettepe Mashruuca Madaarka Madaarka Istanbul
Taariikhda furitaanka Garoonka Diyaaradaha Magaalada Istanbul Gayrettepe
Qariidada Masawirka Gegada Diyaaradaha Magaalada Gayrettepe
Saldhigyada Diyaaradaha Magaalada Istanbul Gayrettepe
Gayrettepe Istanbul Airport Rail Source
Faahfaahinta Farsamada ee Masaarida Masaarida Magaalada Gayrettepe ee Magaalada Istanbul
Halkee marinka metrooga Gayrettepe Airport uu gudbaa
Madaarka Garoonka Gayrettepe-Istanbul